Taunggyi - The Cherry Land: ကျောင်းကထိန်
ရေးသားသူ Chan Mon အချိန် 3:22:00 PM
ကျွန်တော့် အတွက်တော့ ကထိန်လှည့်တဲ့ ခံစားမှုကိုမရခဲ့ပါဘူး သူများတွေလှည့်တာကို ကြည့်ရင်း ပျော်ခဲ့ရတာ..တော်တော်ပျော်စရာကောင်းမှာပဲနော်...
Tuesday, September 18, 2007 11:32:00 PM
ဟုတ်တယ်ဗျ။ ကျောင်းကထိန်တွေဟာတော့်တော့်ကို ပျော်စရာကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေပဲ။ အခုထိကျောင်းကထိန်တွေကို တခုတ်တရ စောင့်ကြည့်မိတုန်းပဲ။ အရုပ်တွေကပိုလှလာပေမယ့် ကိုယ်တိုင်လုပ်တာတွေနဲသွားပြီး သူများဆီအပ်တာတွေပိုများလာတယ်။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတဲ့ အတွေအကြုံကပိုကောင်းတယ်။
နောက buddhist မဟုတ်ပေမဲ့ နှစ်တိုင်းဦးဆောင် ပါဝင်ခဲ့တယ်... ၆ တန်းတုန်းက ကထိန်လုပ်ရင်း ဆရာမအိမ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ(ယောကျာင်္းလေး၊မိန်းကလေး)မခွဲဘဲ ထမင်းတစ်ပန်းကန်တည်းကို အပြန်အလန်ခွံ့ကျွေးစားကြတာ သတိရမိတယ်...
ပြီးတော့ နောတို့ ထ ၆ ကထိန်က အမြဲတမ်းပွဲတွင်းမှာ လှည့်ဖြစ်တယ်...ဒါကြောင့်ကထိန်လှည့်ပြီးတိုင်း သူငယ်ချင်းတွေ အုပ်စုလိုက်ပွဲခင်းဘက် ဆက်သွား ကြတာ အရမ်းပျော်တာပဲ။
ကုံးကင်းထိုးတဲ့အချိန် တစ်ဖွဲ့လုံးဝိုင်းအော်ကြလို့ အများစု နိုင်ကြတယ်(ဆိုင်ရှင်ဆို မျက်နှာ ကြီးမည်း လာပြီး ထရိုက်တော့မယ့်အတိုင်းပဲ..ဟိ ဟိ) တစ်ချို့နှစ်တွေဆို အော်ကြလွန်းလို့ အသံတောင်ဝင်ကုန်တယ် rofl
Oh, feel like im in TGI again attending high school!I did enjoy that school Kahtain while i was in there. I was from BEHS-6 the most smallest high school in taunggyi.I did enjoy my life in taunggyi but unfortunately, it was only for4years, after my high school i have to back to my home town again!
MISS ALL OF MY STUDENT LIFE.
Monday, December 08, 2008 6:14:00 PM
Friday, December 21, 2018 2:10:00 PM